Maxay Tahay Inaad U Gudbiso Google Analytics Universal | Martech Zone
Maxay Tahay Inaad U Gudbiso Google Universal Analytics
Arbacada, Oktoobar 15, 2014 Axad, Oktoobar 19, 2014 Tim Flint
Aynu hadda ka baxno su'aashan jidka. Haddii aad u cusbooneysiiso Falanqaynta Universal Universal ee Google? Haa. Xaqiiqdii, waxay u badan tahay inaad horeyba ugu cusbooneysiisay Universal Analytics. Laakiin, sababtoo ah Google ayaa kuu cusbooneysiisay koontadaada, micnaheedu maahan inaadan sameyn wax kale ama inaad wax badan ka faa'iideysaneyso koontadaada cusub ee Universal Analytics.
Haatan, Falanqaynta Guud ee Google wuxuu ku jiraa wejiga saddexaad soo bixitaankeedii. Waa kabaxsan tahay xisaabaadka badankood si otomaatig ah ayaa kor loogu qaadayaa. Xaqiiqdii, xitaa ma dooran kartid nooca hore ee Analytics markaad sameysaneysid akoon cusub mar dambe. Markii ugu horreysay ee Universal Analytics ay ka baxday beta, wali waxaa ka maqnaa muuqaal muhiim u ah shirkado badan. Taasi waxay muujisay sifooyinka xayeysiinta ee kuu oggolaanaya inaad wax abuurto liisaska dib u habeynta. Hadda, astaamaha muuqaalka ayaa si buuxda loogu dhex daray Universal Analytics (UA), taasoo la micno ah inaysan jirin wax dib u dhigaya koonto cusub oo lala socdo UA. Si kastaba ha noqotee, tani macnaheedu maahan in kaliya sababtoo ah koontadaada waa la casriyeeyay in weli aysan jirin waxyaabo ay tahay in la iska ilaaliyo markii la casriyaynayo.
Waxyaabaha ay tahay in laga fiirsado
Waqtigan xaadirka ah, haddii koodhka ku yaal boggaaga uu adeegsado ga.js, urchin.js, ama noocyada WAP ee koodhka, waxaad u baahan doontaa inaad cusbooneysiiso koodhka marka Google uu gaaro wajiga afraad ee cusbooneysiinta Universal Analytics. Laba sano gudahood marka la bilaabo wajiga afaraad, noocyada noodhka ayaa hoos loo dhigi doonaa. Iyo, maahan kaliya qoraalka la duudsiin doono. Haddii aad hadda haysatid doorsoomayaal caadaysan ama doorsoomayaal qeexan isticmaale isticmaale oo aad u isticmaaleyso raadinta xogta, waa inaad u rogtaa cabirro caado ahaaneed si aad weli awood ugu yeelan karto inaad adeegsato, maadaama iyagana sidoo kale hoos loo dhigi doono.
Tani waxay sidoo kale la micno noqon laheyd mustaqbalka, haddii aad isticmaaleyso qaabkii hore ee aad u sameysay raadinta dhacdada, sidoo kale waa in lagu cusbooneysiiyaa nooca cusub ee sumcadda raadraaca dhacdada. Marka, haddii lambarkaaga aan wali la cusbooneysiinin, maxaad ugu dhex socotaa dhammaan dhibaatooyinka hadda halkii aad sugi lahayd laba sano?
Maxay Tahay Sababta Loo Dhammeynayo?
Sababta Google ay u cusbooneysiineyso kaliya ma ahan inay waqtigaaga kaa lumiyaan. Waxay sii daayeen astaamo qaarkood, haddii aad waqti siiso inaad ku dhaqan geliso, waxay awood kuu siineysaa inaad cabirto waxyaabo aadan waligaa ogaan karin. Barnaamijka cusub wuxuu kuu oggolaanayaa inaad:
Ururinta Xogta Wax Kasta
Abuur Qiyaasta Gaarka ah iyo Qiyaasaha Matoorrada
Samee Aqoonsiyada Isticmaalaha
Ka faa'iideyso E-commerce Kobciyay
Google hadda waxay leedahay saddex dariiqo oo lagu ururiyo xogta: analytics.js ee bogagga internetka, moobiilka SDK ee loogu talagalay macruufka iyo Android, iyo - aniga ahaan aniga midka ugu xiisaha badan - hab maamuuska cabbiraadda aaladaha dhijitaalka ah. Marka hadda waxaad kala socon kartaa boggaga internetka, barnaamijyadaada, iyo mashiinka kafeega haddii aad rabto, gudaha Google Analytics. Dadku waxay durbaba dhigayaan borotokoolka cabirka inuu shaqeeyo si ay u tirin karaan taraafikada lugta dukaankeeda, ula socdaan heerkulka, iyo inbadan. Fursadaha ayaa runtii ah kuwo aan dhammaad lahayn, gaar ahaan muuqaalka cusub ee soo socda awgood.
Cabirrada Customka iyo Qiyaasaha Matoorrada
Cabbirada gaarka ah iyo cabbiraadaha caadiga ah ayaa runtii ah nooca la kariyey ee doorsoomayaashii hore ee caadada u ahaa. Si aan fikrad kaaga siino sida ay awood u yeelan karaan cabirradani cusub, aan dhahno marka qofku isdiiwaangaliyo adeeggaaga oo noqda adeeg u eg Yelp, waxaad weydiineysaa su'aalo taxane ah. Waxaad weydiin kartaa su'aal leh cabir caadiya oo aad u yeerto nooca makhaayada ugu jecel. Jawaabaha su'aalahan waxay noqon karaan cuntada Mexico, dukaamada sandwich-ka, iwm. Waxaad markaa weydiin kartaa su'aal dabagal ah imisa jeer bishii oo ay wax ku cunayaan. Tani waxay ku siinaysaa metrik cusub oo caado ah inta la cunayo bishiiba ama AEOM. Marka, hadda waad eegi kartaa xogtaada si aad uga soocdo isticmaaleyaasha kala duwan si aad u aragto sida ay u adeegsadaan bartaada. Tusaale ahaan, waad kala qaybin kartaa dadka jecel dukaamada sandwich-ka ee wax cuna 5 jeer wiigii. Tani waxay kaa caawin kartaa inaad ogaato sida ugu wanaagsan ee loola beegsan karo waxyaabaha ku jira boggaaga. Fursadaha waa kuwo aan dhammaad lahayn, gaar ahaan marka lagu daro tan barnaamijyada moobiilkaaga. Haddii aad ku dartay raadraackan ciyaarta moobiilkaaga, waxaad ogaan kartaa dhammaan noocyada dariiqooyinka macaamiisha ay ugu ciyaarayaan ciyaarta.
Maaddaama macaamiil badani isticmaalayaan barnaamijyada moobiilka oo macaamiisha ay u kala wareegayaan taleefannada, kiniinnada, iyo aalado kale, runti ma ogaan kartid inta isticmaale ee gaarka ah iyo kuwa firfircoon ee aad bil kasta ku haysatid dhaqanka Analytics. Hadda adoo abuuraya aqoonsi caado ah oo aad u xilsaarto isticmaaleyaashaada, waxaad la socon kartaa isticmaale isticmaala taleefankooda, kiniiniga, iyo laptop-ka si uu ugu adeegsado bartaada hal isticmaale. Tani waxay ku siinaysaa aragti ka sii badan sidii weligeed ahayd sida ay macaamiishaadu u adeegsanayaan adeeggaaga. Micnaheedu maaha laba jeer ama seddex jeer tirinta isticmaaleyaasha. Xogtaada ayaa hada nadiif noqotay.
Iyada oo la adeegsanayo warbixinnada e-commerce ee la xoojiyay, kaliya ha ku ogaan waxa isticmaalayaasha ay ka iibsadeen bartaada iyo inta dakhli ee keenay. Soo ogow sida ay ku dhammaadeen wax iibsigu. Waxaad heli doontaa warbixinno sida waxa macaamiisha ay ku kordhinayaan gawaaridooda iyo waxa ay ka saarayaan gawaaridooda. Xitaa waad ogaan doontaa goorta ay bilaabayaan lacag bixinta iyo marka ay helayaan lacag celin. Haddii ecommerce ay muhiim u tahay bartaada, si qoto dheer u eeg tan halkan maadaama ay jiraan waxyaabo badan oo in la fiiriyo ah.
Waa tan video ku saabsan sida QiimahaGrabber ayaa adeegsanaya Google Universal Analytics:
Maxaad sugeysaa Ka faa'iideyso xogta cusub ee aad marin u heysato si aad macaamiishaada u siiso khibrad xitaa ka sii wanaagsan qalabka oo dhan.
Tags: Analytics googlegoogle Analytics guudqiimeeyahafalanqaynta caalamiga ahcusbooneysii gorfaynta googlecusbooneysii falanqaynta googleu cusbooneysii falanqaynta caalamiga ahwaa maxay falanqaynta guudmaxaa loogu cusboonaysiiyaa falanqaynta caalamiga ah
Tim Flint waa Madaxweynaha Falanqaynta Flint, hay'ad dijitaal ah oo diiradda saareysa warbaahinta lacag bixinta ee internetka, falanqaynta webka, iyo isbadalka sicirka beddelaadda ee shirkadaha yar iyo weynba. Isaguna waa aasaasihii Smartups Indy, waa koox kulmisa bishii oo waxbarta aasaasayaasha bilowga ah iyo suuqleyda ka shaqeysa bilowga sidii ay si wanaagsan ugu kobcin lahaayeen ganacsigooda.
Miyaad Tahay Inaad Dhisato ama Iibsato Qalabkaaga Suuqgeynta Xiga?